सनसनीपूर्ण ‘किस’, जसले मच्चायो तहल्का | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सनसनीपूर्ण ‘किस’, जसले मच्चायो तहल्का
प्रकाशित मिति २८ चैत्र २०७५, बिहीबार १७:०० लेखक नेपाली जनता
अंग्रेजीमा किस, नेपालीमा चुम्बन । अझ ठेट शब्दमा भन्नु पर्दा ‘म्वाईं ’ । यहाँ चर्चा गर्न लागिएको किस अर्थात म्वाईं बलिउडका अभिनेता र अभिनेत्रीको बिषयमा हो । यस्ता केही ‘हट किस सिन’ को चर्चा यहाँ गरिएको छ जसले ‘किस’ खानेलाई मात्र होइन पूरै बलिउड बजार नै ततायो ।
विपाशा बसु र क्रिस्टियानो रोनाल्डो
हाल युभेन्टस क्लबमा स्ट्राइकर रहेका पोर्चुगिज फुलबल खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बलिउड एक्टर बिपाशा बसुलाई सबैको सामुन्ने किस गरेका थिए । उनले गरेको किसले भारतीय सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चा पाएको थियो। क्रिस्टियानो र बिपाशाबीचको त्यो किस यति विवादित बन्यो कि त्यसपछि जोन अब्राहमले बिपाशासँग ब्रेकअप नै गरिदिए ।
राखी र मिका सिंह
सन् २००७ सालतिरको हो। राखी सावन्त मिका सिंहको बर्थडे पार्टीमा सहभागी भएकी थिइन् । त्यहाँ उनलाई मिकाले जबरजस्ती किस गरेका थिए। त्यो किस कान्ड निकै विवादित बन्यो । आपसमा विवाद समाधान नभएपछि किस काण्ड पुलिससम्म पुगेको थियो।
महेश भट्ट र पूजा भट्ट
फिल्म निर्माता तथा निर्देशक महेश भट्टको जीवन प्रायः विवादमै रह्यो। उनी एक पटक आफ्नै छोरी पूजा भट्टलाई किस गरेका कारण विवादमा तानिए । धेरै पहिले स्टारडस्ट म्यागेजिनका लागि उनले पूजासँग ओठ जोडिएको सिन दिनुपर्ने थियो। यो तस्बिर म्यागेजिनको कभरमा छापिएको थियो। यो फोटो विवादमा आउनुको मुख्य कारण थियो महेशले उक्त तस्बिरमाथि गरेको कमेन्ट। महेशले भनेका थिए, ‘यति पूजा मेरी छोरी नभएको म उसँग बिहे नै गरिदिन्थें।’
दीपिका पादुकोण र सिद्धार्थ माल्या
२०१३ सालतिर दीपिका पादुकोण पनि किस सिनका कारण विवादमा थिइन्। सिद्धार्थ माल्यासँग किस गरेका कारण दीपिका विवादमा तानिएकी थिइन्।
त्यो समयमा आइपिएल रोयल च्यालेन्जर्स बेग्लोर र कोलकाता नाइट राइडर्सबीचको म्याच चलिरहेको थियो। दीपिका र सिद्धार्थ सँगै बसेर म्याच हेरिरहेका थिए। जब रोयल च्यालेन्जर्सले म्याच जित्यो सिद्धार्थले दीपिकालाई समातेर किस गरे। त्यो किसपछि उनीहरु विवादमा तानिएका हुन् । हाल दीपिका रणबीर सिंहकी पत्नी हुन् । उनको क्रिकेटर युवराज सिंहसंग पनि लामो समय अफेयर्स चलेको थियो ।
लिना चन्द्रावरकर र राम जेठमलानी
राम जेठमलानी भारतका चर्चित वकिल हुन्। सन् २०१५ मा उनी एक अवार्ड फङ्सनमा सहभागी थिए। सोही कार्यक्रममा चर्चित अभिनेत्री लिना चन्द्रावरकर पनि सहभागी थिइन्। उक्त समारोहमा ककिल जेठमलानीले चन्द्रावरकरसँग हट लिप किस गरेका थिए। जुन किसको चर्चा निकै पछिसम्म पनि हुने गरेको थियो।
स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब बजेट विनियोजन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
खतिवडाले मुलुकभर बीमा…
विराटनगर । पण्डित श्रीनिवास आयार्चमाथि गोली प्रहार गर्न भारतीय सुटरको प्रयोग गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यस विषयमा…
पर्वत । जिल्लाकाे सामुदायिक रेडियो ‘रेडियो पर्वत’मा गएराति आगालागी भएको छ ।
राति १ बजेको समयमा विद्युत् चुहिएर आगलागी हुँदा…
‘उस्मान’ आँधीका कारण फिलिपिन्समा मृत्यु हुनेको संख्या १ सय २६ पुग्यो
मनिला । क्रिसमसपछि फिलिपिन्सको मध्यपूर्वी क्षेत्रमा आएको आँधी र पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १ सय २६ पुगेको छ…
लोभले लाभ, लाभले बिलापः बिदा नलिएको आरोपमा स्वीडेनमा एक नेपाली देश निकाला !
काठमाडाैं । स्वीडेनको एक रेष्टुरेन्टमा कुक रहेका नेपाली कामदारलाई स्वीडेनले आफ्नो देश फर्किन आदेश दिएको हो । उनको ‘अपराध’…
अमेरिकाबाट नेपाल आएर रामप्रसाद खनालले गाए पञ्चेबाजाको मन छुने गीत, रिलिज भयो दुलाहा दुलहीको भिडियो ! 223 views